रेपरबाट सावधान हुनुहोस्, नयाँ प्रकारको बोटनेट - Semalt विशेषज्ञ
Botnets एक मिलियन कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरुमा पकड छ, र तिनीहरू अझै संख्या मा बढ्दै छन्। सुरक्षा विश्लेषकहरूले नयाँ बोटनेटलाई रिपर भनेर चिनिने गम्भीर चेतावनी जारी गरेका छन्। यो साइबर तूफान हुने भविष्यवाणी गरिएको छ कि ईन्टरनेट सेवाहरु र धेरै उपकरणहरु लाई दुनिया भर मा अवरोध। सबैभन्दा खराब पक्ष यो हो कि यो तपाईंको ज्ञान बिना तपाईंको व्यक्तिगत कम्प्युटरमा स्थापना गर्न सकिन्छ। ज्याक मिलर, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक भन्छन् कि यसले राउटरहरू , स्मार्टफोनहरू, र अन्य जस्ता त्यस्ता उपकरणहरू पनि छिर्न सक्छ र धेरै खतरनाक छ।
बोटनेट अनलाइन, मालिसियस उपकरणहरूको विशाल संग्रह हो जुन केन्द्रीय कम्प्युटरले नियन्त्रण गर्छ। सिद्धान्तमा, यो ठीक छ यो बाहेक यसले संक्रमित कम्प्युटरहरू, राउटरहरू, ट्याबलेटहरू, र स्मार्टफोनहरूलाई एकसाथ राख्दछ र मालवेयर र भाइरसहरूको साथ धेरै नयाँ उपकरणहरूलाई संक्रमित गर्दछ। सब भन्दा कपटपूर्ण भाग मध्ये एक यो हो कि प्रयोगकर्ताहरूलाई थाहा छैन कि तिनीहरूका उपकरणहरू बोटनेटद्वारा संक्रमित भएका छन्, किनकि यो मालवेयर चुपचाप नराम्रो गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्दैछ।
Botnets तल ल्याउन र लक्षित गर्न को लागी केहि अनलाईन सेवाहरु लाई DDOS (सेवाहरु को वितरित अस्वीकार) को लागी प्रयोग गरीन्छ। तिनीहरू पनि स्प्याम अभियान को एक ठूलो संख्या को वितरण। किनभने प्रयोगकर्ताहरूले विचार पाउँदैनन् कि बोटनेट्स उनीहरूको कम्प्युटरमा संक्रमित हुन्छ, स्प्यामरहरूको लागि तपाईंको व्यक्तिगत डाटा चोरी गर्न यो सजिलो छ। सबैभन्दा खराब कुरा यो हो कि साइबर अपराधले botnets सिर्जना गर्दछ र बिडकर्ताहरूलाई बेच्छ जुन उनीहरूलाई विश्वभर साइबर अपराध प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्दछ।
केहि महिना अघि, मिराई बोटनेटले संयुक्त राज्यमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भयो र धेरै राउटरहरू संक्रमित गर्‍यो। यसले यन्त्रहरूको सुरक्षा सेटिंग्समा केही कमजोरीहरूको शोषण गर्‍यो, र सब भन्दा राम्रो जोखिम रिपर थियो।
कपास भनेको के हो?
रेपरले सजीलो रूपमा अधिक र अधिक कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणहरू लाई पुर्‍याउन सक्छ र यसको पूर्ववर्तीहरू भन्दा गम्भीर खतरनाक हुन्छ। सुरक्षा विश्लेषकहरूले समस्यालाई जनतामा ल्याए किनकि उनीहरू सबैलाई जानकारी दिन चाहन्थे कि विश्वव्यापी रूपमा धेरै राउटरहरू संक्रमित भएका थिए।
टोलीले आईओटी आईपीएस सुरक्षा भेद गर्ने प्रयासमा बृद्धि भएको देख्यो, र यस्तो टेकओभरको मात्रा कुनै समयमै स्पष्ट भयो। अष्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई लाख भन्दा बढी संगठनहरूले संक्रमित उपकरणहरूको बारेमा गुनासो गरे। अनुसन्धान टोलीले सुझाव दिए कि अर्को साइबर तूफान आउँदैछ।
तपाइँको उपकरणलाई संक्रमित गर्दा रोपरलाई कसरी रोक्ने?
अबदेखि, रेपरसँग सम्बद्ध सबै संक्रमणहरू राउटरहरू र इन्टरनेट-आधारित क्यामेराहरूमा सीमित छन्। यद्यपि तपाईको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणमा तपाईले एन्टि-मालवेयर प्रोग्राम स्थापना गर्नु पर्छ तपाईको उपकरणबाट यसबाट सुरक्षा गर्न। म्याक र पीसीहरू यस प्रकारको मालवेयरको लागि अत्यधिक कमजोर हुन्छन्, त्यसैले तपाईंले BitDefender प्रयास गर्नुपर्नेछ। एन्ड्रोइड र ट्याब्लेट प्रयोगकर्ताहरूले उपयुक्त उपकरण सफ्टवेयर स्थापना गर्न आफ्नो उपकरणहरू रोक्न सक्दछन्।